U-Israyeli uyavuma ukuthi abesifazane base-Itiyopiya abazalelwe yibo abangazalwa, babefingqa nsuku zonke. UNgqongqoshe Wezempilo ubuze bonke odokotela bezinyanga kanye nezinhlangano ezine ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 21, 2020 12: 12 Awekho amazwana
Isimo samanje sakwa-Israyeli siyindalo ye-Masonic, engahlobene ne-Israyeli webhayibheli. Vumela abaphikisi bami babheke ifulege laleli lizwe elidumile lesiHeberu ... Funda kabanzi
Ukubhekisisa ikoloni laseChina e-Afrika naseCaribbean? Ngemuva kokuhweba okwenziwe ngunxantathu okudumisayo ngokumelene nokubuyela emuva ebugqilini, ikoloni yaseYurophu, i-neocolonialism yaseNtshonalanga, kungaba yithuba laseChina ukwenza ikoloni le-Afrika kanye neCaribbean… (VideO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 20, 2020 05: 00 Awekho amazwana
Ukuqalwa kweChina e-Afrika naseCaribbean kuyaqhubeka ngezinga elethusayo. Eminye imibuzo kufanele isisindo sabo egolide ngale njongo: kungani amaShayina ahlasela i-sp ... Funda kabanzi
I-China imemezela ukuthi izokwandisa ukuba khona kwayo kwezempi e-Afrika: ingabe iChina inecebo e-Afrika?
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 20, 2020 03: 35 Awekho amazwana
Kusukela maphakathi nawo-1990s, izinkomba eziningi zikhombisile ukukhuphuka kwamandla eChina ezwenikazi lase-Afrika. Ngaphansi kweminyaka emihlanu, umphakathi waseChina e-Afrika u ... Funda kabanzi
Ngabe ngiyamzonda unkulunkulu wamaKristu? Lokhu yilokhu abanye abangane abangamaKristu abangimangalela njalo: Maye, kukhona abambalwa abazonda lokho okungekho "Ngakho-ke angizondi mina kuphela unkulunkulu ophindwe kathathu munye"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 14, 2020 06: 06 Awekho amazwana
Kepha uma unikezwe imvamisa engibuzwe ngayo umbuzo, kufanele ngiphendule - Imizwa ayinandaba, ungasho. Yebo, uqinisile, kodwa ... Funda kabanzi